“Mihamy Mada Fashion”: fanantenana ho an’ny haihaingo… | NewsMada
“Mihamy Mada Fashion”: fanantenana ho an’ny haihaingo…
Samy niaiky avokoa… Efa ela no niandrandra hetsika toa ny “Mihamy mada Fashion” ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny haihaingo sy ny famoronan-damaody. Niezaka tamin’ny herin’ny tenany irery izy ireo hatramin’izay, ka tsy tena nisongadina. Tosika lehibe kosa ny fikarakaran’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera ny “Mihamy Mada Fashion”, izay nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina.
Samy nanasongadina ny maha zava-dehibe ny hetsika ireo nifandimby nandray fitenenana, nahitana ny solontenan’ny mpamoron-damaody sy mpampiranty. Nanamafy izany tanatin’ny kabariny rahateo ny minisitry ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, ary nandrisika ny famoronana mankany amin’ny tsara kokoa hatrany.
Mpamoron-damaody avy amina faritra maro manerana ny Nosy no tonga mandray anjara etsy amin’ny Lapan’ny Kolontsaina. Tamin’ny lanonam-panokafana dia efa nisy ny santionan’ny sangansan’izy ireo, nasehon’ireo mpilatro. Akora fototra malagasy, forona malagasy ary mpanjifa malagasy ihany koa no irariana amin’izay. Saika manasongadina izay koa ireo tranoheva nanehoan’ireo mpamorona ny sanganasany, izay mahatratra 40 eo ho eo.
Taorian’ny lanonam-panokafana, nisy ny vela-kevitra niarahana tamin’ireo mpamoron-damaody matihanina, toa an-dry Vida, Ma, sns. Tsy ampy ny fotoana nifanakalozana, satria tsikaritra fa maro ireo liana amin’ny haihaingo sy ny lamaody, indrindra ireo mpianatra. Nanaingo ny hetsika ny seho ara-mozika nentin-dry Bakidy Gegette, Mr Sayda ary ry Reko Fy & his band.
Hitohy anio sy rahampitso ny filatroana, fampirantiana ary ny seho an-tsehatra, mandritra ny “Mihamy Mada fashion” andiany voalohany.